Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: toy ny tongotra vakivaky ka sady mangirifiry no mahamenatra | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: toy ny tongotra vakivaky ka sady mangirifiry no mahamenatra
Tsy misy fitsaharana ny fisondrotry ny vidim-piainana. Ho an’ny ankamaroan’ny olona izay mahatsapa fahasarotana amin’ny fiatrehana ny filàna ao an-tokantrano isan’andro, dia tsy misy tokontaniny izany fiomanana amin’ny fanaovana fetin’ny noely sy ny famaranana ny taona izany : tany mena tsy mirehitra. Aleo aloha tsy mieritreritra mialoha izay fahasahiranana fantatra fa hitranga, samy mionona hiatrika izay fisehony eo.
Ny mpanao pôlitika koa dia variana amin’izay mahasahirana azy. Ao ireo fanina tsy tafarina toy ny akoho voakapoka noho ny vokatra mahamenatra tsy nampoiziny tamin’iny fifidianana fihodinana voalohany iny, andaniny kosa ireo roa tonta izay voatana hikatroka amin’ny fihodinana faharoa. Mbola tolona tsy omby tratra. Maro no manahy ny hitrangana herisetra eo amin’ny fifandonana, na mandritry ny fotoan’ny fampielezan-kevitra sy fandresen-dahatra, na rehefa mivoaka ny valin’ny safidim-bahoaka.
Mifanandrify amin’ny fotoan’ny fety ny mety hitrangan’ny savorovoro. Tsy hataon’ny mponina hahakivy anefa izany. Ankoatra ny mpikarama an’ady, tsy vonona hanampy trotraka ny fahasahiranana mianjady andavan’andro ny ankamaron’ ny olona. Fantany loatra fa tsy ny fandraisana anjara amin’ny korontana no hamaha ny olana ao amin’ny ankohonany.
Mahalasa saina ihany ny fanaovana fifidianana eto an-tanàna. Ity fanao izay heverina hanazava ny sehatry ny fitondrana ity indray no, isak’izay mandeha izao, mitarika fisehoana rahona mampanjombona bebe hatrany ny tontolo iainan’ny mponina. Leo ny mpifidy fa tsy mampiketraka azy izany. Tamin’ity indray mitoraka ity dia toy ny tora-bato ny hafatra natsipiny any amin’ireo sahisahy fahantany tamin’ny filatsahany, toa fitsapatsapana fotsiny na noho ny fiheverany ny tenany hihoatra noho izay tena izy. Raha azo vinavinaina miainga amin’ny tarehimarika mikasika ny vokatra heno siosio etsy sy eroa, dia 90 % eo ho eo ny vato azon’ny telo voalohany, izany hoe 10 % no ifandrobahan’ny 33 mianadahy hafa, raha tsinjaraina dia 0,3 % isanisany.
Asa raha hipetraka ho anatry ny sisa izay. Teny an-tenantenan-dàlana dia efa hita taratra ny tsy fahafahan’ny atody hikatroka amam-bato, nefa tsy nahay nivondrona akory izy ireo na hoe nikambana fotsiny aza nahafahana nampihena ny mason-karena rehefa tsapa ny mety ho fisehon’ny fatiantoka. Raha afaka dimy taona, dia handinika lalina ireo maniry handray anjara, alohan’ny hametrahany ny filatsahana.